मौसम परिवर्तनले जकार बेसिनमा खडेरी बढाउन सक्छ नेटवर्क मौसम विज्ञान
मौसम परिवर्तनले जकार बेसिनमा खडेरी बढाउन सक्छ
वैज्ञानिकहरू भन्छन कि जलवायु परिवर्तनले खडेरीको आवृत्ति र तीव्रता बढाउँछ। त्यसकारण, यो घटना यो ज्याकर बेसिनमा लगातार र गहिरा खडेरी हुन सक्छ। यो भ्यालेन्सियाको पोलिटेक्निक विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ताहरु द्वारा डिजाइन गरिएको एक पद्धतिद्वारा प्रदर्शन गरिएको छ।
के तपाइँ मौसम परिवर्तनले जकार बेसिनमा पर्ने परिणामहरू जान्न चाहानुहुन्छ?
1 जकारमा थप खडेरी
2 महत्वपूर्ण पक्षहरू
जकारमा थप खडेरी
अनुसन्धानकर्ताहरु द्वारा डिजाइन गरिएको विधिले हामीलाई जकार क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव जान्न अनुमति दिन्छ। अध्ययनको नतीजाले संकेत गर्दछ कि सूखा मध्यम अवधि र परिदृश्यका लागि पहिचान गरिएको भन्दा कम परिमाण र तीव्रताको हुनेछ।
अध्ययनको अन्तिम निष्कर्ष भनेको यही हो कि मौसम परिवर्तन र यसको प्रभावले भूमण्डलीय परिदृश्य निम्त्याउँछ जसमा सुख्खा धेरै बारम्बार हुने गर्छ, दुवै मौसम र हाइड्रोलोजिकल, किनभने वर्षा घट्ने र बढेको विश्वव्यापी औसत तापक्रममा वृद्धिको कारण वाष्पीकरण
यस विधिलाई अनुसन्धानकर्ताहरु द्वारा विकसित गरिएको छ Valencia को Polytechnic विश्वविद्यालय को पानी र वातावरण इन्जीनियरिंग को संस्थान (आईआमा - यूपीभी) प्याट्रसिया मार्कोस, एन्टोनियो लोपेज र मनुएल पुलिडो, र वैज्ञानिक जर्नल "जर्नल अफ हाइड्रोलोजी" मा प्रकाशित भएको छ।
काम IMPADAPT भित्रै छ र Jcar बेसिन अध्ययन को एक वस्तु को रूप मा प्रयोग भएको छ, वर्तमान खडेरीको प्रभाव को कारण। स्पष्ट निष्कर्ष निकाल्न अनुसन्धानकर्ताहरूले दशकौंदेखि बेसिनमा संकलन गरिएको खडेरी तथ्या .्कलाई तुलना गर्दै आएका छन् र वैश्विक र क्षेत्रीय जलवायु मोडेलका साथ जोडिएका छन्।
मौसम र हाइड्रोलोजिकल सुख्खा डाटालाई राम्रोसँग तुलना गर्नु महत्त्वपूर्ण छ, किनकि दुवै जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित छन्। पहिलोले वर्षभरि वर्षा कम गर्दछ र दोस्रो पानीको वाष्पीकरण बढाउँदछ। दुबै केसमा, मानव उपभोगका लागि उपलब्ध पानीको मात्रा कम हुँदैछ.
जकार बेसिनमा तीन फरक जलवायु क्षेत्र एकसाथ हुनु भन्ने तथ्यलाई पनि विचार गरीएको छ। एकातिर, हामीसँग महाद्वीपीय जलवायुको साथ माथिल्लो क्षेत्र छ, मध्य बेसिनमा हामीसँग एक संक्रमणकालीन जलवायु छ र तल्लोमा भूमध्यसागरीय मौसम। यस स्थानिक परिवर्तनशीलता डिग्री को प्रभाव गर्दछ जुनमा जलवायु परिवर्तनको प्रभावहरु उनीहरुमा सुखा अवधिको तीव्रता र अवधिलाई असर गर्दछ।
मौसम परिवर्तनले सबै मौसम क्षेत्रलाई समान रूपमा प्रभाव पार्दैन, त्यसैले यसको विस्तृत दृष्टिकोण हुनु महत्त्वपूर्ण छ जकार बेसिनमा तीन मौसम क्षेत्र।
"परम्परागत रूपमा, मानकीकृत सूचकांकहरू खडेलालाई पहिचान गर्न र मूल्या to्कन गर्न प्रयोग गरिएको छ, उनीहरूको सरलता र लचिलोपनका कारण विभिन्न समयको तराजुमा क्षेत्रहरू बीचको सामान्य अवस्थाबाटको भिन्नता तुलना गर्न," प्याट्रिसिया मार्कोसले भने।
अवश्य पनि यो जोड्नै पर्दछ कि यी तथ्याical्कगत तथ्या्कले उनीहरूलाई जलवायु परिवर्तनका केही पक्षहरूमा समाहित गर्न वर्षको .तुहरूको उपस्थितिलाई ध्यानमा राख्छन्। यी तथ्या climate्कहरू जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भमा पर्याप्त शable्कास्पद छन् किनकि वर्षको मौसमको अवस्था व्यावहारिक रूपमा गर्मी र जाडोमा कम हुँदै गइरहेको छ।
विकसित विधि भूमध्यसागरीय बेसिनहरूमा अनुकूलित छ र सूखाको आवृत्ति र तीव्रतामा जलवायु परिवर्तनको प्रभावको विश्लेषणको अनुमति दिन्छ। वर्षा र तापमान को चर सबै निर्धारण कारक हो, किनभने ती ती हुन् जसले पानीको स्रोत घटाउँछन्। एउटा कम पानी इनपुटका कारण र अर्को भण्डारित पानीको अधिक हानिको कारण।
"हाम्रो नतीजाहरु ठूलो अनिश्चितता भविष्यमा खोलामा पानीको स्रोतको उपलब्धताको बारेमा। अध्ययनले देखाउँदछ कि विभिन्न जलवायु परिवर्तनको परिदृश्यले कसरी मौसम र हाइड्रोलोजिकल सुख्खाको अवधि र गहनतामा सामान्य बृद्धि गर्दछ, कम वर्षा र बाष्पीकरण वृद्धिको संयुक्त प्रभावका कारण ", निर्देशकलाई संकेत गर्दछ। आईआमा, मनुएल पुलिडो।
छोटो अवधिमा देखिएको खडेरी मध्यम अवधिमा देखिने भन्दा कम हुन्छ, त्यसैले यदि हामी अहिले गम्भीर अवस्थामा छौं भने, भविष्यमा हामीले पर्खिरहेको भविष्य अझ नराम्रो हुन्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: नेटवर्क मौसम विज्ञान » मौसम विज्ञान » मौसम परिवर्तन » मौसम परिवर्तनले जकार बेसिनमा खडेरी बढाउन सक्छ
कसरी सिरोस बादलहरू गठन हुन्छन् र उनीहरूले कस्तो पूर्वानुमान गर्छन्?
जापानमा शीतलहर: देशले आफ्नो न्यूनतम तापमान lowest 48 बर्षमा दर्ता गर्दछ